Ciidamada Dowladda iyo AMISOM oo Howlgal Ballaaran ka Sameeyay Suuqa Xoolaha
Home Somali News East Africa Ciidamada Dowladda iyo AMISOM oo Howlgal Ballaaran ka Sameeyay Suuqa Xoolaha
Howlgalkani oo ahaa mid ballaaran islamarkaana looga gol leeyhay xaqiijinta ammaanka xaafada suuqa xoolaha ee Mgaalada Muqdisho ayaa waxaa halkaasi ka sameeyay ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM.
Sida wararka ay sheegayaan ciidamada AMISOM iyo kuwa Dowladda Soomaaliya ayaa gudaha ugalay xaafadaha kala duwan ee Suuqa Xoolaha halkaasi oo ay guri guri ubaarayeen.
Qaar kamid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamada Dowladda Soomaaliya ay gacanta kusoo dhigeen dhalinyaro kala duwan kuwaasi oo qaarkood lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin Ururka Al-Shabaab oo aad loogu xanto inay suuqa xoolaha ka buxaan.
Dhalinyaro kala duwan ayaa la sheegy in howlgalka lagu qabtay kuwaasi oo iminka ay gacanta ku hayaan ciidamada Dowladda Soomaaliya iyaga oo wajiyada ka xiran sida qof kamid ah dadka deegaanka uu noo sheegay.
Saraakiisha ciidamada Dowladda Soomaaliya ee howlgalkaasi horkacaya ilaa iyo iminka kama aysan hadlin sababta ka dambeysay howgalka iyo sidoo kale inm ciidamada ay guryaha baaraan.